Isi ikike ise niile ndị isi nnabata niile kwesịrị inwe Franchiseek
»5 isi ikike niile nna ukwu franchisees kwesịrị inwe
O nwere ike ịbụ na ị nụtụla nna ukwu franchising ma juo ma ọ nwere ike ịbụ maka gị na azụmaahịa gị. Ọ bụ ezie na ịchụ nta ụlọ ahịa nwere ike ịdị ka ohere kachasị mma iji gbasaa azụmahịa gị n'ụwa niile, enwere ụfọdụ ihe ịchọrọ iji tụlee - ọ bụghị naanị na azụmaahịa gị, kamakwa na ndị ị họọrọ inyere gị aka ịgbasa. Ghọ franchisee nke ukwu dị iche na ịbụ onye na-ede aha mgbe niile, ị kwesịrị ịmara nke ọma na njiri mara mma ịchọrọ iji chọọ mgbe ị na-ahọrọ ndị ga - enyere gị aka ịme azụmahịa gị.
Mark Jameson, si FASTSIGNS International, Inc. kwuru: "N'ihi na nna ukwu franchisees, anyị na-achọ savvy oru buu igba n'ulo na-nwere a miri emi nghọta nke ihe ọ na-ewe na-eto eto a ika na mba ọhụrụ, na mgbakwunye na nke a na-chụpụrụ iji nyere aka ulo oru na ha obodo dozie ha visual nkwukọrịta na ahịa nsogbu."
Na nke a, anyị na-eleba anya na isi ise ọkachamara kachasị mma ọkachamara nwere.
Ọtụtụ ahụmahụ na nnukwu òtù
Iji nyere gị aka ịmegharị aha zuru ụwa ọnụ, onye ị na-akpọ aha ga-enwe ahụmịhe nke ịrụ ọrụ na nnukwu azụmaahịa nwere usoro dị mgbagwoju anya. Workedrụ ọrụ na gburugburu ebe dị otú a ga-enye franchise ahụ ezigbo nghọta banyere otu akụkụ dị iche iche nke nnukwu azụmaahịa si arụ ọrụ, jikọọ ma rụọ ọrụ. Master franchising nwere ike bụrụ ihe dị mgbagwoju anya na ọtụtụ akụkụ na-akpụ akpụ, yana nsonaazụ, onye isi franchisee kwesịrị inwe ahụ iru ala ma nwee ntụkwasị obi na usoro dị otú a. Ọ ga-abụ ọrụ nke nna gị ukwu franchisees iji gbasaa azụmahịa, nke nwere ike ịgbakwunye na mgbagwoju anya nke azụmahịa usoro. Nna-ukwu gị franchisee ga-enwe ahụ dị mkpa iji mee ka azụmahịa na-agba ọsọ na kacha arụmọrụ mgbe n'out oge na-eto eto na ọrụ.
Ezi nghọta banyere ịzụlite na nzụlite omenala ebe ọrụ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ franchisees ga-azụlite ọdịbendị nke otu ngalaba ha, ndị isi ụlọ ọrụ nwere ọrụ dị ukwuu n'ịmepụta omenaala maka ngalaba ọ bụla na mpaghara ha. Nna-ukwu nnabata ị họọrọ kwesịrị igosipụta na ha ghọtara mkpa ọ dị omenaala ebe ọrụ ahụike dị mma yana mmetụta ọ nwere na azụmaahịa a.
Ọzọkwa, onye nwe gị nwere ike ịmepe ngalaba na mpaghara nwere ọdịbendị dị iche na nke mbụ na usoro ọrụ, mmasị ndị ahịa yana ọbụlagodi azụmaahịa. Nna-ukwu gị franchise ga-adị mkpa ịmara banyere ọdịiche dị iche iche nke ọdịbendị ndị a ma gbalịsie ike ịhazi ụkpụrụ nke azụmahịa mbụ, yana ọdịbendị ọdịbendị nke ókèala ọhụrụ ahụ, ndị ọrụ ya na ndị ahịa ya.
Ezigbo ndu ndú
Ezigbo nnabata franchise ọ bụla ga - abụ ezigbo onye ndu. Ha ga-enwerịrị mmekọrịta siri ike na ndị franchise, ndị ọrụ, ndị ahịa na obodo azụmaahịa. Ha ga-enwe ike isetịpụrụ ndị franceis n'ókèala ha ihe atụ ma ndị na-arụrụ ha ọrụ ga na-akwanyere ha ùgwù. Ikike nke nna ukwu franchisee idu nwere ike inwe nnukwu mmetụta na azụmaahịa ahụ. Iji rara onwe ha nye zuru oke maka azụmahịa ma rụọ ọrụ ha na oke agụụ, ndị franchise kwesịrị ịtụkwasị obi ma kwanyere ọhụụ nke nnabata ukwu. Nwere ike chọọ ịtụle ndị nwere ezigbo agwa, nwee ike ịgba ndị ọzọ ume.
Agbanyeghị, ọ bụchaghị onye na-eme mkpọtụ ma ọ bụ onye na-eme mkpọtụ na-eme nnukwu onye ndu. Inwe ike ime ka ndị mmadụ chee na ha bara uru ma dịka ọrụ ha na-arụ bụ akụkụ dị mkpa nke azụmaahịa dịkwa oke mkpa. Ihe dị mkpa ọ bụ ezie bụ ikike iduzi azụmaahịa ahụ n'ụzọ doro anya na agụụ na ọhụụ. Ezigbo onye ndu nwere ike ime ka ndị ọzọ kwenye nwee okwukwe n'ọhụhụ ha ma were nkà nkwukọrịta ha kọwaa ihe ekwesiri ime iji nweta ebumnuche ha.
Ezi nghọta banyere ókèala ọhụrụ ahụ
Otu n’ime isi ihe dị mkpa nna gị ga - eji aha gị mee nwere ike bụrụ ihe n’enweghị - nghọta dị mma banyere mpaghara ị na - agbasawanye. Dị ka anyị tụlere n’elu, enwere ike inwe nnukwu nghọtahie dị iche n’etiti obodo gị na nke ị na-agbasawanye. Ọ ga-abụ ọrụ nke nna ukwu franchisee iji zụlite ụfọdụ omenala na ụkpụrụ nke mpaghara ha. Ọzọkwa, enwere ike inwe ihe mgbochi nke naanị onye nwere ezi nghọta banyere ókèala ga-emeri. Iji maa atụ, asụsụ nwere ike ịdị iche ma ọ bụ usoro akụ na ụba yana nke siri ike ịnyagharị. Nna-ukwu franchisee kwesịrị ma ọ dịkarịa ala mara otu esi enweta enyemaka iji chịkwaa esemokwu ndị a. Ọzọkwa, enwere ike inwe esemokwu mpaghara na mpaghara ahụ, ndị nwe ụlọ ọrụ ga-enwe ike ịghọta etu mpaghara mpaghara ndị a nwere ike isi metụta azụmaahịa a.
Ike magburu onwe ya ịzụ na mezuo ọzụzụ
Ọbụna onye ọkachamara ọkachamara nwere ikike ga-achọ ọzụzụ na-aga n'ihu. Dị ka ndị na-ahụ maka mpaghara ahụ dum, ha kwesịrị ịnụ ọkụ n'obi na ị na-agbaso usoro azụmahịa dị mkpa. Ha kwesiri inwe ikike iziga ihe omuma ha na nkwado ha n’aka ndi ozo ndi ozo n’ókèala ha ma jigide oke obi uto maka nkuzi na mmuta. Ọ dị mkpa na ndị franchise ga-enwe ahụ iru ala iru nna ukwu franchise ebe ha na-agba mgba.
You dịla njikere iburu azụmahịa gị n'ọkwa ọzọ? Kpọsaanụ nnabata nnabata nnabata nnabata na Franchiseek Akwụkwọ ndekọ aha mba ụwa.